Ajụjụ Ndị A Na - ajụkarị - YTpals
Ndị a bụ azịza nye ajụjụ anyị ndị a na-ajụkarị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta azịza ebe a, zitere anyị email.
Mgbe ị gara YTpals, pịa bọtịnụ “Nbanye / Debanye aha” na menu nke isi.
Biko mara: anyị anaghị enweta ozi nbanye gị ma ọ bụ nwee ohere ịnweta akaụntụ YouTube gị n'agbanyeghị ihe ọ bụla. Akaụntụ gị nwere ike iji YTpals n'enweghị nsogbu ọ bụla nke YTpals ma ọ bụ ndị ọzọ na-enweta ohere.
Mgbe ị nọ na ọnụ ụzọ otu, a na-ewepụta gị na atụmatụ 4 YTpals, nke gụnyere Basic, Starter (Kasị ama), Enterprise na Celebrity. Dabere na mkpa gị na ihe ịchọrọ, ị nwere ike kpebie iji atụmatụ Ego efu ma ọ bụ obere ego kwa ọnwa, soro atụmatụ akwụ ụgwọ dịka prisebanye ma ọ bụ atụmatụ a ma ama.
Kedu ka nchekwa YTpals dị?
YTpals bụ ọrụ nchekwa na ntụkwasị obi site n'aka ndị otu 300,000 +, na-eto site na nkeji! Ihe nzuzo gị na nchedo bụ ebumnuche anyị #1, ya mere anyị ji zụlite nzuzo siri ike ma chekwaa weebụsaịtị echekwara site na iji ederede 256-bit.
A na-echekwa ozi nbanye akaụntụ m na YTpals?
Mgbe ịpị bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ”, aga-edugharị gị gaa na peeji ebe ịkwesịrị ịdebanye aha ọwa 10 ọzọ na-amasị. Youzọzọ pịa bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ” bọtịnụ ahụ, biko jiri nlezianya soro ntuziaka na ihuenyo iji rụọ ọrụ atụmatụ ahụ nke ọma.
Usoro ohuru a gha aru oru ma gha eweghachi ndi nile debanyere aha 5 tupu akara 24-hour, tupu imeghari bọtịnụ a, mana buru n’obi na ụfọdụ ndị nwere ike wepu aha gị n’aka, na-eme ka ị nweta ihe gbasara 3- Ndị debanyere aha 5 n'oge mmegharị ọ bụla. A machibidoro ndị wepụrụ aha ndị ọrụ ndị ọzọ enwetara site na YTpals na-akpaghị aka.
Atụmatụ ebumnuche nwere ikike 2 isi, nke bụ na enyere gị ohere iji ya otu oge kwa awa 24, ị ga-abanyekwa na YTpals oge ọ bụla iji tinyegharị atụmatụ gị. Nke a pụtara, mgbe ịpịrị bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ”, ị gaghị enwe ike pịa bọtịnụ “Mee ihe” ọzọ maka awa 24 ọzọ. Mgbe oge awa nke 24 gafere ma kwe ka ị pịa bọtịnụ “Mee ihe” ọzọ, ị ga-enweta ọkwa Email na-akpaghị aka iji chetara gị ma ịbanye na ịnweta nke a.
Mgbe ịpị bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ”, aga-edugharị gị gaa na peeji ebe ịkwesịrị ịdebanye aha ọwa 20 ọzọ na-amasị. Youzọzọ pịa bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ” bọtịnụ ahụ, biko jiri nlezianya soro ntuziaka na ihuenyo iji rụọ ọrụ atụmatụ ahụ nke ọma.
Ọ bụrụ n’ịhụta nsogbu ọ bụla ịnwa ịchọrọ na / ma ọ bụ denye aha na ọwa, pịa bọtịnụ “Skip” edo edo iji gosipụta ọwa ọhụrụ. Mgbe itinyere aha gị nke ọma na ọwa 20 ma nwee mmasị na vidiyo 20, atụmatụ Starter ga-arụ ọrụ ma ị ga-enweta ndị debanyere aha 10 n'ime oge ọrụ oge 12.
Usoro ohuru a gha aru oru ma gha eweghachi ndi nile debanyere aha 10 tupu akara 12-hour, tupu imeghari bọtịnụ a, mana buru n’obi na ụfọdụ ndị nwere ike wepu aha gị n’aka, na-eme ka ị nweta ihe gbasara 7- Ndị debanyere aha 10 n'oge mmegharị ọ bụla. A machibidoro ndị wepụrụ aha ndị ọrụ ndị ọzọ enwetara site na YTpals na-akpaghị aka.
Celkagbu atụmatụ gị n'efu. Naanị abanye na YTpals ma jiri ọrụ anyị, ị gaghịzi enweta ma ọ bụ zipu ndị debanyere aha ọhụrụ. Biko buru n'uche na ọwa ndị ịdenye aha na YTpals ga-anọrịrị na akaụntụ gị ka ịhazie ndị ọrụ ndị ọzọ.
Mgbe ị debanyere aha na Enterprise, Elite or Celebrity plan, ị ga-enweta ndị debanyere aha 10-15 (Enterprise), 20-30 ndị debanyere aha (Elite), ma ọ bụ 40-60 ndị debanyere aha (Celebrity) kwa ụbọchị, 100% na-akpaghị aka. Usersfọdụ ndị ọrụ ga-wepu aha ezie na, na-ahapụ gị ihe dị ka 70-80% nke ndị debanyere aha mgbe ọ bụla ebighị.
N'adịghị ka atụmatụ ndị ahụ, atụmatụ ndị a kwụrụ ụgwọ bụ 100% akpaka, nke pụtara na ozugbo ị debanyere aha maka ya, ị gaghị alaghachi na YTpals ọzọ. Anyị ga-enye gị ndị debanyere aha ọhụrụ kwa ụbọchị ka akaụntụ gị bawanye na nchekwa na otu ebe, na-enweghị isi!
Ọnụahịa ndị anyị na-akwụ maka atụmatụ ndị a pere mpe karịa ọtụtụ webụsaịtị ga-akwụ ụgwọ maka ndị debanyere aha "adịgboroja" nke a na-ewepụta otu oge kama ịdị na-apụta, na-eto kwa ụbọchị dị ka anyị na-anapụta.
Atụmatụ ndị a akwụ ụgwọ na-eme ka uto gị dị ka ihe okike ma na-efu obere ego nke ọnụahịa ahụ!
Ọ bụrụ n’ịzụrụ atụmatụ nke ụlọ ọrụ, Elite ma ọ bụ Celebrity nke ọma, mana ndenye aha gị anaghị arụ ọrụ, biko kpọtụrụ anyị ma zitere anyị nseta ihuenyo nke azụmahịa ma ọ bụ peeji nnata na URL ọwa gị, nke ga-enye anyị ozi niile anyị chọrọ iji nyere gị aka.
Mgbe ịzụrụ Enterprise, Elite or Celebrity plan, ọwa gị na-abanye na netwọk n'ime awa ole na ole wee nọgide n'ime ya maka awa 24, nke bụ mmalite nke ụbọchị mbụ gị. N'ime oge elekere 24 ahụ, ị ​​ga-enweta oke nke ndị debanyere aha gị ụbọchị ahụ, usoro a ga-eme kwa ọzọ n'echi ya. Buru n'uche, ndị debanyere aha anaghị abịa n'otu ntabi anya, mana a na-enyefe ha n'ime oge elekere 24, kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ịnabataghị ndị debanyere aha ọ bụla n'ime awa 48, biko zitere anyị ozi, anyị ga-eleba ya anya.
Mgbe ị jiri ọrụ YTpals, ọnụ ọgụgụ na-egosi na ihe dị ka 70-80% nke ndị debanyere aha ị na-enweta kwa ụbọchị na-anọgide na akaụntụ gị. N'iburu nke a, anyị na-ewepụta mgbakwunye iji nyere aka kwụọ ụgwọ ihe ndị funahụrụ gị.
Imirikiti ndị ahịa anyị nwere obi ụtọ maka ọrụ ahụ n'ihi na ọ na - enyere ọwa ha aka itolite maka ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
Mgbe ịzụrụ ụlọ ọrụ Enterprise, Elite ma ọ bụ ndenye aha Celebrity, a ga-akwụ gị ụgwọ otu ụbọchị kwa ọnwa. Ọ bụrụ n ’oge ụfọdụ ị chọghịzi ndenye aha gị YTpals, zitere anyị ozi site na ibe Kpọtụrụ Anyị ma anyị ga-etinye akaụntụ gị ka ọ gwụ na njedebe nke ndenye aha ọnwa gị ugbu a.
Enweghị kaadị akwụmụgwọ? Nsogbu adịghị. Lezienụ na kaadị Onyinye!
NKWUPUTA: +150,000 iji were ego gị tinye na kaadi onyinye.
OWO EGO: Enweghị nrụgharị, ojiji ma ọ bụ ụgwọ mmegharị! Ọ bụ naanị ego gị - na kaadị onyinye.
MGBE: Havekwesighi ịdebanye aha ma ọ bụ inye ozi / ego ụlọ akụ iji jiri kaadị onyinye.
MGBE: Zụọ ahịa ma jiri kaadị onyinye dị na desktọpụ, mbadamba ma ọ bụ mkpanaka kwụọ ụgwọ.
Zụta kaadị onyinye site na CVS / ahịa ọgwụ, Dollar General ma ọ bụ oBucks. Nwere ike ịlele maka ebe mgbere ahịa kacha nso gị site na itinye koodu zip gị na otu weebụsaịtị ha.
Banye na akaụntụ YTpals gị ma họrọ ma "Enterprise", "Elite" ma ọ bụ "Celebrity" na-ezube iji nweta nkwalite.
Họrọ "Jiri kaadi onyinye" kwụọ ụgwọ ma tinye nkọwa kaadị onyinye gị mgbe kpaliri.